Lahatsoratra nataon'i Ajoy Krishnamoorthy momba ny Martech Zone
Lahatsoratra nosoratan'i Ajoy Krishnamoorthy
Ny mpitarika marketing sy ny varotra dia singa iray lehibe amin'ny fampandehanana ny fidiram-bolan'ny orinasa. Ny departemanta marketing dia mitana andraikitra lehibe amin'ny fampiroboroboana ny orinasa, amin'ny antsipirihany ny momba azy, ary amin'ny fametrahana ireo manavaka azy. Ny marketing dia miteraka fahalianana amin'ny vokatra ary miteraka fitarihana na vinavina. Amin'ny fampisehoana, ny ekipa mpivarotra dia mifantoka amin'ny famadihana ireo vinavinany ho an'ny mpanjifa mandoa. Ireo asa dia mifamatotra akaiky ary manakiana ny fahombiazan'ny orinasa iray manontolo. Raha jerena ny fiatraikany amin'ny varotra sy ny marketing